Uzivula njani iifayile ze-CBR - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 23/06/2022 20:00 | Izicelo
Iifayile zedijithali esinokuzifumana kwiiplatifti ezahlukeneyo ze-intanethi zinokonwatyiswa ngezixhobo ezahlukeneyo kwi-PDF, iZwi, iJPG okanye ezinye izandiso ezinokuba sisihlandlo sokuqala uzibona kwaye ezinokuvulwa kuphela ngezicelo ezithile. Namhlanje siza kuthetha ngendlela yokuvula iifayile ze-CBRNjengoko uninzi lwenu sele lusazi, ziifayile eziqulathe imifanekiso eyahlukeneyo enokujongwa kusetyenziswa usetyenziso oluthile.
Olu hlobo lwefomati yefayile lunxulumene ikakhulu nelizwe leecomics., nangona inokufumaneka kwezinye iindidi zeefayile. Ukuba ungumthandi wee-comics, ngokuqinisekileyo ubufuna ukuzonwabela ngaphezu kwesihlandlo esinye, kodwa awuyazi indlela yokuvula ifayile ye-CBR, oku kuya kuphelisa umbulelo kumaqhinga esiya kukunika wona kolu papasho.
1 Ziziphi iifayile ze-CBR?
2 Iinkqubo zokuvula iifayile zeCBR kwiWindows
2.1 Udlala iCD
3 Iinkqubo zokuvula iifayile zeCBR kwiMac
3.1 Umbukeli weNcwadi yeeComic
4 Iinkqubo zokuvula iifayile ze-CBR kwi-Android okanye i-IOS
Ziziphi iifayile ze-CBR?
Ezi fayile ze-CBR zifana nezinye ezininzi esiya kuba nazo ngaphezu kwesinye, i-ZIP okanye i-RAR, uthotho lwamaxwebhu axinanisiweyo. Omnye umahluko ophambili weefayile ze-CBR kukuba ezi ziqulathe amabali agcwele ngokulandelelana kwemifanekiso. Le mifanekiso ibekwe ngendlela ethile, ukuze xa izonwabele yenziwe ngocwangco.
Iifayile ze-CBR, ngokwesiqhelo njengoko besibonisile ekuqaleni koshicilelo, zisetyenziselwa ukugcina iicomics ngokwedijithali. Yifomathi, engabonisi nakuphi na ukungaphumeleli xa i-decompressing kunye nezicelo ezithile zayo ezifana neWinZip.
Umenzi wale fomati yefayile nguDavid Ayton, owathi kwiminyaka yoo-90 wavelisa isoftware yokujonga iicomics ngaphandle kweengxaki, le software yayiyiCDisplay.. Ukuphehlelelwa kwale nkqubo intsha yaba lutshintsho olukhulu kwihlabathi lokujongwa kwemifanekiso ekhoyo ukuza kuthi ga ngoku.
Enkosi kwi-CDisplay, ulandelelwano lwemifanekiso lubonwe kwiscreen ngokubukhali okukhulu.z, umgangatho kunye neenkcukacha, ehlala ehlonipha ulandelelwano oluphawulweyo xa ufunda ama-adventures ababaliswayo phakathi kwamaphepha.
Ii-initials "CB", eziqhelekileyo zolu hlobo lwefayile, zivela kwi-Comic Book, ifomathi eyenziwe ngokukodwa ukuba ikwazi ukuyivula ngokusebenzisa i-software ye-CDisplay. Ukuba ngexesha le Ukukhuphela ezi fayile ujonga unobumba wokugqibela, oku kubhekisa kudidi locinezelo olusetyenzisiweyo, oko kukuthi, ukuba idlula kwifayile yeRAR, iya kuvela .cbr, kwelinye icala ukuba yi ZIP, ifayile iya kuvela enegama .cbz.
Ukuba ungaphezulu kokulungela ukuqhubeka okanye uqalise ukonwabela amabali amahlaya akho owathandayo, Sikuzisela ukhetho lwezinye iinkqubo ezilungileyo zokukhuphela kunye nokuvula olu hlobo lwefayile ngendlela elula nengenaziphene, kwicandelo elilandelayo. Asiyi kubona kuphela iinkqubo ezibonisiweyo kwabo basebenzisi Windows, kodwa nakwabo basebenzisa iMac.Ukongeza kwizicelo mobile zombini Android kunye IOS.
Iinkqubo zokuvula iifayile zeCBR kwiWindows
Ukuba ungumsebenzisi weWindows kwaye ufuna ukwazi kwaye ufunde ukuba ungazivula njani iifayile ze-CBR, unokufumana enye yezi nkqubo zilandelayo esiza kuzikhankanya.
Asinakuyikhankanya le nkqubo kuluhlu lwethu kwaye siyabulela umdali wayo ngombono wokwenza olu hlobo lwefomathi nayo yonke into eyingqongileyo. Umboniso weCD, Yinkqubo elula kakhulu yeekhompyuter, kodwa kwangaxeshanye isebenza kakuhle kakhulu Kwaye ngaphandle kokulibala ukuba ikhululekile ngokupheleleyo.
Yinkqubo esele isetyenzwe ngokukodwa kwaye yenye yezinto ezithandwayo ngabathandi bamahlaya. Inika amava okufunda amnandi, ukwazi ukufunda iifomathi ezahlukeneyo njengePDF, CBR, CBZ, phakathi kwezinye. Iicomics zilayishwa kwimiba yemizuzwana ngaphandle kokulahlekelwa umgangatho kunye nokuhlonipha zonke iintlobo zeenkcukacha.
Enye yeenkqubo ezinkulu, malunga nokufunda iifayile zeCBR iboniswe ukufunda iicomics ekhompyutheni. Ngale software, awukwazi nje ukonwabela amabali abaliswa phakathi kwamaphepha eecomics, kodwa unokuhlela umxholo wedijithali.
Inqaku elihle kulabo bantu banomona wokwabelana ngeefayile zabo, kukuba I-Gonvisor ikunika ithuba lokukhusela amaxwebhu akho okufunda ngokusebenzisa igama eliyimfihlo. Ukhetho olunika ixabiso koludweliso lwenkqubo.
Iinkqubo zokuvula iifayile zeCBR kwiMac
Kweli nqanaba apho ukhoyo, siza kubona iinkqubo ezahlukeneyo apho abasebenzisi beMac baya kuba nakho ukuvula iifayile zeCBR ngaphandle kweengxaki.
Umbukeli weNcwadi yeeComic
Ngale nkqubo yokuqala esiyizisa kolu luhlu, awuyi kukwazi ukuvula iifayile ze-CBR kuphela, kodwa kunye neefayile ze-CBZ kunye neePDF. Ngokusebenzisa ujongano olulula kakhulu, uya kuba nakho ukuhamba ngokukhawuleza kuwo wonke umxholo okunika wona. Oku kwenziwa kube lula ukubulela kwi-thumbnails eziswe kuwe.
Enye yezinto ezinomtsalane zayo kukuba ixhasa ufundo lwephepha eliphindwe kabini nokujongwa. Ngolu khetho lokubonisa, injongo kukulinganisa ukufunda okuhlekisayo ngokwasemzimbeni, ngokungathi utyhila amaphepha ukusuka ekunene ukuya ekhohlo ngeminwe yakho. Unokuba nale nkqubo kwisixhobo sakho ngeApp Store ye-5.49 euros.
Njengezinye iinkqubo ezininzi ebesizikhankanya, i-DrawnStrip Reader ikwahambelana nezinye iindidi zeefomati ukongeza kwi-CBR, efana ne; CBZ, CB7. CBT, ZIP, RAR, phakathi kwabanye. Le software sithetha ngayo ilungiselelwe izikrini zeretina, ikwakunika ithuba lokuguqula ezi fayile kwezinye iifomati.
Ikwakuvumela ukuba ukhuphe imifanekiso kwiifayile zakho ozithandayo, kwaye ukwazi ukwabelana ngazo. Inqaku elincomekayo kukuba ikunika ukukhanya kunye nohlengahlengiso lokuthelekisa ukuyiqhelanisa nezinto ozikhethayo. Unokufumana i-DrawnStrip Reader ngokuyithenga kwi-Apple Store ngexabiso le-4.49 euro.
Iinkqubo zokuvula iifayile ze-CBR kwi-Android okanye i-IOS
Kweli candelo lokugqibela, siza kubona uthotho lwezicelo ezibonisiweyo ukonwabela olu hlobo lweefayile kwizixhobo zethu eziphathwayo ngaphandle kohlobo lokukhuphela okanye impazamo yokubonisa.
Enye yezona zicelo zibalaseleyo onokuthi uzifumane kwimarike yezixhobo ze-Android, onokuthi ukonwabele zombini iifayile zeCBR kunye neCBZ. Ayihlali nje kuphela apho, kodwa iyahambelana nezinye iindidi zeefomati ezifana neJPG, GIF, PNG okanye BMP.
Sisicelo sasimahla, kodwa sinomxholo wentengiso, onokuthi uyisuse ukuba uthenga i-app ehlanganisiweyo. Qaphela ukuba akugcini nje ukuvumela ukuba udibanise iifayile ze-CBR kunye ne-CBZ ngokuthe ngqo, kodwa unokufikelela kwimifanekiso ngokuzimeleyo.
Kubasebenzisi be-IOS, sikuphathele oku isicelo esilula kakhulu esinjongo iphambili ikukuvumela ukuba ufunde iifayile zeCBR kunye neCBZ. Ngayo, unokufikelela kwiifayile ezigcinwe kwiindawo ezahlukeneyo zedijithali njengeDropbox, iDrive, OneDrive, njl.
Ukukhuphela iifayile ezikhethiweyo kuyo nayiphi na iwebhusayithi kwenziwa ngokuthe ngqo kwisixhobo sakho esiphathwayo. Njengakwimeko yangaphambili, sisicelo sasimahla esifumaneka kwivenkile yeApple.
Ukuza kuthi ga ngoku, uluhlu lwethu oluneengcebiso ezahlukeneyo zeenkqubo kunye nezicelo ezikhoyo ukuze ukwazi ukuntywila kumabali amnandi ehlabathi lamahlaya. Kuya kufuneka wazi kuphela, ukuba yeyiphi inkqubo okanye isicelo esibonakaliswe ngokwesixhobo apho ufuna ukuqala ukufunda, ukukhuphela, ukufaka kunye nokuqala ukonwabela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubomi beByte » Izicelo » Indlela yokuvula iifayile ze-CBR
Ungawabona njani amabali e-Instagram ngaphandle kokubonwa